မာရီယာ vazquez | 08/05/2021 10:00 | နေအိမ်
ကျွန်ုပ်တို့လေ ၀ င်လေထွက်လမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များ၏ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှူရှိုက်မိသောလေထု၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် ဦး စားပေးဖြစ်သင့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်ထားသောစက်မှုလေဝင်လေထွက်စနစ်အကြောင်းကိုဤနေရာတွင်ပြောရန်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆကြသည်။
El ထိန်းချုပ်ထားစက်မှုလေဝင်လေထွက်စနစ်ဆောင်းပါးများစွာတွင်ယင်း၏အတိုကောက် VMC မှရည်ညွှန်းထားသော၊ လေထဲရှိလေအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များ၌စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန်ထုတ်ယူခြင်းပန်ကာတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ ဘယ်လိုလဲ?
3 passive အိမ်များအတွက်သော့ချက်ဒြပ်စင်
တစ် ဦး ကထိန်းချုပ်ထားစက်မှုလေဝင်လေထွက်စနစ်ကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် တစ် ဦး အိပ်ဇောပန်ကာ၏အရေးယူမှုကိုအသုံးပြုသည် အိမ်၏လေထုသက်တမ်းတိုးရန်။ ဤထုတ်ယူခြင်းပန်ကာသည်ပြင်ပလေဖိအားနှင့်အပူချိန်အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူအိမ်မှလိုအပ်သောလေပမာဏကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးထုတ်ယူခွင့်ပြုသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမိတ်ဆက်ပေးသောလေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အတွင်းပိုင်းမှထွက်ခွာသွားသောလေထုတို့ဖြစ်သည် သီးခြားဆားကစ်မှတဆင့် channel နေကြသည် အပူပြန်လည်နာလန်ထူယူနစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်သွယ်ဝိုက်။ အဆက်အသွယ်ရှိသော်လည်းရောနှောခြင်းမရှိသောကြောင့်လေထုထဲတွင်အပူသို့မဟုတ်အအေးကဲ့သို့သောစွမ်းအင်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
အဲဒီမှာ ထိန်းချုပ်ထားသောစက်မှုလေဝင်လေထွက်၏စနစ်နှစ်ခုကို: စက်မှုထုတ်ယူခြင်းနှင့်သဘာဝ ၀ င်ခွင့်တို့ပါ ၀ င်သောတစ်ခုတည်းစီးဆင်းမှုစနစ်နှင့်စက်မှုထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဝန်ခံခြင်းနှင့်အတူနှစ်စီးစီးမှုစနစ်။ စနစ်နှစ်ခုစလုံးသည်ခြောက်သွေ့သောမှစိုစွတ်သောareasရိယာများသို့လေထုကိုရွေ့လျားစေပြီးစိုစွတ်သောinရိယာများမှထုတ်လွှတ်သောညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကိုအိမ်၏ကျန်တစ်လျှောက်လုံးပြန့်နှံ့စေသည်။
dual- စီးဆင်းမှုစနစ်ကိုလည်းအိမ်တွင်းအသံနှင့်အထီးကျန်နှင့်အများဆုံးအပူသက်သာခြင်းပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စီးဆင်းစနစ်၏မျက်နှာစာသည်လေ ၀ င်ပေါက်များအားတွန်းအားပေးသော Grid များဖြင့်အမြဲတမ်းအစားထိုးသောကြောင့်၊
ထိန်းချုပ်ထားသောစက်မှုလေဝင်လေထွက် (VMC) စနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၏လေအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ကျန်းမာရေးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များစွာရရှိစေသည့်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဖော်ပြရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ဟောင်းနွမ်းသောလေကိုရှူရှိုက်မိခြင်းမှကာကွယ်ပါ။ မတူညီသောအစီရင်ခံစာများအရအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ဂရုမစိုက်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
လုပ်တယ် မလိုအပ်သည့်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ် လေကိုသက်တမ်းတိုးဖို့။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်အလုပ်ချိန်သို့မဟုတ်အနားယူချိန်ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်အချိန်များတွင်လမ်းဆူညံသံများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
အဆောက်အ ဦး ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ လေဝင်လေထွက်ညံ့ဖျင်းခြင်းသည်မကြာခဏ dampness သို့မဟုတ် mold သို့ ဦး တည်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? လေဝင်လေထွက်မကောင်းသည့်အခါလေထဲတွင်ပါသောရေသည်မထွက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Recuperator မှရရှိသောငွေစုသည်စွမ်းအင်လက်မှတ်၏ရလာဒ်များကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်စားသုံးမှုနည်းသောအိမ်ရာစီမံကိန်းများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းစေသည်။
Bezzia တွင်ဤစနစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြခဲ့ခြင်းကရှင်းလင်းချက်ကိုရည်ညွှန်းသည့်ဆောင်းပါးတွင်ဖြစ်သည် passive နှင့်ဂေဟစနစ်အိမ်များအကြားခြားနားချက်။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်ထားစက်မှုလေဝင်လေထွက်စနစ်များကိုများစွာသောတစ် ဦး အဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည် ဇီဝရာသီဥတုမဟာဗျူဟာများ တတ်နိုင်သမျှတက်ကြွသောစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
passive အိမ်တစ်ခုတွင်၎င်း၏လည်ပတ်မှု၏ ၈၀ မှ ၉၀% အကြားကောင်းမွန်သောဇီဝရာသီဥတုပုံစံဒီဇိုင်းကိုအခြေခံသည်။ အဆင်ပြေသောအတွင်းပိုင်းအခြေအနေများ - အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသည့်နည်းဗျူဟာ - နှင့်အတူ အနည်းဆုံးတက်ကြွစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုသို့ပြုကြသည်မဟုတ်လော။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာခြေရာကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုတန်ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည်။ ငါတို့ဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်းနယ်ပယ်မှလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်အိမ်တစ်လုံးဆောက်တော့မည်လော။ အထက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးကိုဖတ်။ ဤဆောင်းပါး၌သင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်နည်းဗျူဟာများကိုစဉ်းစားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » ထိန်းချုပ်ထားသောစက်မှုလေဝင်လေထွက်၊